रोल्पाका ७ वटा वडाबाट माओवादीको विजयी सुरुवात – Satyapati
रोल्पाका ७ वटा वडाबाट माओवादीको विजयी सुरुवात
सत्यपाटी । रोल्पा
रोल्पामा माओवादी विजयी सुरुवात गरेको छ । अहिलेसम्म रोल्पा नगरपालिका वडा न. १ मा खुमबहादुर थापाले ९८७ मत पाउँदा नेपाली कांग्रेसको ३७० मत ल्याएका छन् । यस्तै सुनिल स्मृति गाउँपालिका–१ मा पनि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पवन कवर विजयी भएका छन् ।
कवरले ७७६ मतका साथ विजयी हासिल गर्दा एमाले–कांग्रेस र विप्लवका साझा उम्मेदवार ससिराम कवरले ३७४ मत पाएका छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रले थबाङ गाउँपालिका–५ मा गोबर्धन घर्ती विजयी हासिल गरेका छन् । त्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार देउराम घर्ती विजयी भएका छन् ।
उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दिलबहादुर घर्तीलाई पराजित गरेका हुन् । देउरामले ४८८ मत पाउँदा दिलबहादुरले ४१२ पाएका छन् । यस वडामा ७६ मतान्तर रहेको छ । माडि वडा न. १ मा माओवादीकै रोहित सिंह घर्तीमगर ८९० मतका साथ बिजयी भएका छन् । परिबर्तन गाउँपालिका वडा न. १ मा पनि माओवादीले जित हासिल गरेको छ । लुङग्री गाउँपालिका ७ मा पनि माओवादीका उमेद्वार विजयी भएका छन् ।
मतदानको दिन पास लिएका गाडी मात्रै चल्ने, सार्वजनिक गाडी नचल्ने
निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल सम्भव : प्रवक्ता डा.महत
मुहान सुक्दै जाँदा खानेपानीको हाहाकार